कसको “चरीत्र” कस्तो हुन्छ, नामको “पहिलो अक्षर”बाट थाहा पाउनुस !
यो पनि पढ्नुस :यी कुराले हामीलाई सफलतामा अवरोध ल्याउछ !
एजेन्सी । अब हामीले केही नयाँ काम सुरु गछौँ, तब कयौँ समस्या आउने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले ती समस्याबाट हैरानी भएर कामलाई अधुरै छोडिदिन्छन् भने कुनै व्यक्ति ती समस्यासँग जुधेर लगातार काममा लागिरहन्छन्।
तर कुनै बेला यस्तो समय आउछ समस्या घटनुको साटो अझ बढ्दै जान्छ। यो समस्या हाम्रो समयको साथसाथै हाबी हुँदै जान्छ। र हामी कमजोर बन्दै जान्छौँ। समस्याले हाम्रीलाई तनावमा पार्नुका साथै तर्क शक्तिमा समेत कमजोर बनाउदै लैजान्छ।
आईपर्ने समस्याको समाधान कसरी गर्ने !
जहाँ सफलता हुन्छ त्यहाँ समस्या पनि हुन्छ । किनभने चिनी भएको ठाउँमा कमिला जसरी पनि आउँछ । कमिला आउनु कमिलाको दोष होइन ,दोष त हामि आफैले त्यहाँ चिनी राख्नु हो । जीवनमा जे जति समस्याहरु आउँछन् ति सबैको कारण हामी आफै नै हो ।
अन्तः समस्या त हामी आफै तिनीहरुबाट फुत्कीन नजानेर बनेको हो । डुलुवा कुकुर डुल्दै डुल्दै आउँछ र तपाईले सफा गरेको ठाउँमा वा तुलसिको मठमा पिसाव गरेर जान्छ । त्यसलाई के गर्ने ? ठोक्ने ? अह ठोक्न मिल्दैन, त्यसलाई पनि दुख्छ नी, कतिपय मन्छेको बानी पनि त्यहि हून्छ डुलुवा कुकुर र विरालाको जस्तै हुन्छ ।
ठिकै छ ती त जनावर भए बुद्धी हुदैन तर सोच विचार गर्न सक्ने विवेक भएको मान्छेले पनि बुद्धीले काम गर्न जानेन भने जीन्दगीमा सा¥है दुःख पाउँछ उसले । हामिले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने समस्या जीवनमा आउँछ आयो भनेर समस्यासँग पिडित हुने होइन त्यो सँग बुद्धीले जुध्न सक्नु पर्दछ ।